के हो ‘सुगर रिलेसनशिप’को चलन ? किन गरिन्छ सुगर रिलेसनशिप ? – ramechhapkhabar.com
के हो ‘सुगर रिलेसनशिप’को चलन ? किन गरिन्छ सुगर रिलेसनशिप ?
आजकल धनी मानिसहरूले युवतीहरूसँग सुगर रिलेसनशिप राख्ने प्रचलन बढेर गएको छ । उमेर पुगेका धनी पुरुषले कम उमेरका युवतीसँग सम्बन्धका लागि मोटो रकम चुक्ता गर्ने गरेका छन् । यस्तो सम्बन्धमा रहेका युवतीलाई सुगर बेबी र पुरुषलाई सुगर ड्याडी भन्ने गरिन्छ ।
अमेरिका, अस्ट्रेलिया र बेलायतजस्ता विकसित देशमा लाखौं मानिस यस्तो सम्बन्धमा बस्ने गरेका छन् । यस सम्बन्धलाई वेश्यावृत्तिको संज्ञा भने दिइँदैन । यस्तो सम्बन्धमा २५ देखि ३० वर्ष उमेरका युवतीहरूले ४५ देखि ५० वर्ष उमेरका पुरुषसँग सम्बन्ध कायम गर्छन् । बढी उमेरका धनी मानिससँग सम्झौता गरी युवतीहरूले इन्टिमेसीका लागि पैसा लिने गरेका छन् ।
कानमा क्षयरोग ? दुर्लभ रोगबाट पीडित छिन् महिला !
एक महिलालाई दशकौंसम्म संक्रमण भएपछि कानमा विशेष किसिमको रोग लागेको थाहा भएको छ । रोगलाई टर्की ईयर भनिन्छ । यो क्षयरोग अर्थात् टीबीका कारणले हुने गर्छ । महिलाले ५० वर्षको उमेरमा आएर छालामा टीबी भएको थाहा पाइन् । यसले गर्दा उनको कान दशकौंदेखि फुलिरहेको थियो । यसले कानको रंग एप्पल जेली जस्तो हुन्छ । छाला रातो, रफ र कठोर हुन पुग्छ ।
जेएएमए डर्मेटोलोजी पत्रिकामा मार्च ३ मा छापिएको रिपोर्टअनुसार, महिलाको कानमा बच्चा हुँदादेखि नै संक्रमण थियो । समयक्रममा यो बढ्दै गयो । त्यसपछि कान फुलेर खैरो–रातो रंगको भयो ।
यी महिला सन् २००८ मा टर्की ईयर रोगको उपचार गराउन क्लिनिक गएकी थिइन् । उनलाई चारवटा एन्टीबायोटिक चलाएर दुई महिनासम्म उपचार गरियो । त्यसपछि दुईवटा एन्टीबायोटिक घटाएर सात महिनासम्म उपचार गरियो । बिस्तारै संक्रमण कम हुँदै थियो तर महिलाले बीचैमा उपचार रोकिन् । उपचार पूरा गरेको भए संक्रमण हराउँथ्यो । छालामा टीबी संक्रमण गर्ने ब्याक्टेरियालाई माइक्रो ब्याक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस भनिन्छ ।